सांसद शान्ता चौधरी ‘बी’ ग्रेड,करिष्मा मानन्धर ‘बी’ प्लस ग्रेडसहित एसईई उत्तीर्ण - नेपाल मिडिया सेन्टर डट कम
सांसद शान्ता चौधरी ‘बी’ ग्रेड,करिष्मा मानन्धर ‘बी’ प्लस ग्रेडसहित एसईई उत्तीर्ण
प्रकाशित मिति : Thursday, June 27, 2019 nayapulonline
काठमाण्डौ/ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाकी संसदीय दलकी सचेतक शान्ता चौधरी माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईमा उत्तीर्ण हुनु भएको छ ।
उहाँ ‘बी’ ग्रेडमा उत्तीर्ण हुनु भएको हो । उहाँले २.६५ जीपीए ल्याउनु भएको छ । उहाँले गएको चैतमा भएको परीक्षा दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ६ मा रहेको मावि सेन्टर तुलसीपुरबाट दिनु भएको थियो ।
नियमिततर्फ महेन्द्र मावि तुलसीपुरमा सञ्चालित खुला विद्यालयमा अध्ययन गरेकी चौधरीकाे (सिम्बोल नम्बर ०५८८४५३ भी हो । उहाँले सेण्टर मावि तुलसीपुर केन्द्रबाट परीक्षा दिनुभएको हो । उहाँकी छोरी विनु पनि एसईईमा उत्तीर्ण हुनु भएको छ । विनुले काठमाण्डौस्थित बसुन्धराबाट परीक्षा दिनु भएको थियो । २०७३ सालमा मावि डाँडागाउँमा कक्षा आठमा भर्ना भएपछि शान्ताको औपचारिक पढाइ सुरु भएको हो ।
२०६४ सालमा पहिलो संविधानसभामा उहाँ समानुपातिक सभाषद बन्नु भएको थियो । संसदीय समितिमा बस्दा पढाइ पनि आवश्यक हुने ठानेपछि उहाँले औपचारिक अध्ययनलाई निरन्तरता दिनु भएको हो । त्यसअघि उहाँ दाङमै कम्लरीमा भएर निकै संघर्षपूर्ण जीवन बिताउनु भएको थियो । थारु समुदायमा कम्लरी हुँदै पहिलो संविधानसभामा सभाषद भएपछि उहाँले ‘कम्लरीदेखि सभाषदसम्म’ आत्मकथा पनि सार्वजनिक गर्नु भएको थियो ।
यस्तै एसईई परीक्षामा अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर ३ जीपीए नम्बरसहित उत्तीर्ण भएकी छिन् । मानन्धर बी प्लस ग्रेडमा उत्तीर्ण भएकी हुन् ।
अभिनेत्री मानन्धरले एसईईको तयारीका लागि विध्यालयमा भर्ना भएर नियमित कक्षा समेत लिएकी थिइन् । उनी त्रिवेणी पब्लिक बोर्डिङ स्कुलमा कक्षा ८ मा भर्ना भएकी थिइन् । त्यसै विद्यालयबाट उनले एसईईको तयारी गरेकी थिइन् ।
अभिनेत्री मानन्धरले अध्ययन गरेको त्रिवेणी पब्लिक बोर्डिङ स्कुलको सेन्टर विजय स्मारक माविमा परेको थियो । काठमाण्डौको डिल्ली बजारमा रहेको त्यस विद्यालयबाट उनले एसईई दिएकी हुन् ।
करिष्माले कक्षा ७ पढ्दापढ्दै पढाइ बीचैमा छोडेर सिने क्षेत्रमा लागेकी थिइन् । उनी चलचित्र क्षेत्रमा आउँदा मात्र १४ वर्षकी थिइन् । एकपछि अर्को चलचित्रमा प्रशंसा हुन थालेपछि उनले पढाइ बिर्सिइन् र चलचित्र क्षेत्रमा नै रमाउन थालिन् ।
चलचित्रमा काम गरिरहँदा उनलाई पढाइको कत्ति पनि आवस्यकता महसुस भएन । उनी सुन्दर, सफल र कुशल अभिनेत्रीको नामले सबै माझ परिचित बन्दै गइन् । उनी लामो समय अमेरिका बसिन् ।
अमेरिकामा रहँदा सम्म पनि उनलाई पढाईले बाधा गरेको थिएन । अमेरिकाको लामो बसाइपछि उनी नेपाल फर्किइन् । नेपाल फर्किएपछि भने उनी राजनितितर्फ आकिर्षित भइन् । उनी डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीमा आबद्ध भइन् । त्यसपछि भने उनलाई पढाइ खड्किन थाल्यो । पढाइलाई उमेरले छेक्दैन भने जस्तै उनलाई पनि उमेरले रोकेन । उनी कक्षा ८ बाट आफ्नो अध्ययनलाई अघि बढाइन् । विद्यालय त नियमित जान्थिन् नै त्यससँगै एकाउन्ट र गणित विषयको ट्यूसनसमेत पढ्न थालिन् ।
एसईईकै लागि उनले निकै मेहेनत गरेकी थिइन् । विद्यालय भर्ना भएको सुरुवाति दिन करिष्माको लागि सहज थिएनन् । आफ्ना छोरी समान साथीहरुसँगै बसेर पढ्नु पर्दा उनीहरुसँग घुलमिल हुन निकै गाह्रो भयो । सबै जनाले धेरै बेर हेरिरहन्थे । तर, बिस्तारै उनले सबै कुरा स्वीकारिन् । हाल भने अभिनेत्री मानन्धरले डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टी परित्याग गरिसकेकी छन् ।
आफूलाई सहज बनाइन् । ‘लक्ष्य लिए पछि असम्भव भन्ने के नै हुन्छ र’ उनी भन्छिन् ।
यस वर्षको एसईई परीक्षामा देशभरबाट ४ लाख ५० हजार २ साय ७५ परीक्षार्थी सहभागी भएकोमा ३.६ देखि ४ जीपीएसम्म ल्याउने १७ हजार ५ सय ८० जना, ३.२ देखि ३.६ जीपीएसम्म ल्याउने ५१ हजार १ सय ३७ जना, २.८ देखि ३.२ जीपीएसम्म ल्याउने ६३ हजार ७ सय ४१ जना, २ देखि २.४ जीपीएसम्म ९८ हजार २ सय ७ जना रहेका छन् ।
त्यस्तै १.६ देखि २ जीपीएसम्म ल्याउने ९५ हजार ३ सय ७ जना, १.२ जीपीएदेखि १.६ जीपीएसम्म ल्याउने परीक्षार्थीको संख्या ४३ हजार ८ सय ४१ जना रहेका छन् ।
एसईई परीक्षाको नतिजा प्रकाशित,कुन बिषय पढन कति जीपीए चाहिन्छ ?
कोरियाली भाषा परीक्षा २०१९ को नतिजा सार्वजनिक, कटलाइन मेन्युमा ३८, एग्रीमा ३७
दशैंमा कहाँ पुग्न कति भाडा लाग्छ ?
बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकामा श्रमदान गरेर बिजुली
बुटवल उपमहानगरपालिकामा उपभोक्ता मार्फत ७८ करोडका योजना
टेको फाउण्डेसन सहितका संस्थाद्धारा नागपुजेका पहिरो पिडितलाई राहत बितरण